မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ Gmail Security စိတ်ချရအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ – Internet Journal |
မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ Gmail Security စိတ်ချရအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
Aug 30, 2018Comments Off on မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ Gmail Security စိတ်ချရအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ0480
Gmail သည် E-mail အသုံးပြုသူများအကြားတွင် ရေပန်းစားအသုံးများခဲ့သည်မှာ ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းနယ်ပယ် အသီးသီး တွင်သာမက Personal mail များအဖြစ် Gmail ကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေကြခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်း၏လုံခြုံမှုအတွက်လည်း အစီအမံများစွာ ရှိနေပြီးဖြစ်သည်။ ထိုသို့အစီအမံများစွာထဲမှ အသုံးပြုသူများအတွက် အဆင်ပြေသင့်တော်မည့် လုံခြုံရေးနည်းလမ်းများကို ဖော်ပြပေး လိုက်ရပါသည်။
အသုံးပြုသူတိုင်း မဖြစ်မနေ ပြုလုပ်ထားသင့်သည်မှာ မိမိ Account ၏ Password လုံခြုံမှုနှင့် ကြံ့ခိုင်စေမှုပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယခင်အပတ် များတွင် Password Security နှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်သလိုယခု Gmail အသုံးပြုသူများအတွက် Password Security ပိုင်းများတွင်လည်း ထိုနည်းတူပင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၎င်းအပြင် သိရှိထားသင့်သည်မှာ Gmail password သည် Google Account Password ပင်ဖြစ်ပြီး Google မှပေးထားသည့် များပြားလှသော ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနိုင်သည့်အတွက် လွန်စွာအရေးကြီးပါသည်။
Password တစ်ခု Strong ဖြစ်စေရန် အနည်းဆုံး Capital Letter, Number, Special Characters များ ပါဝင်သင့်ပါသည်။ ၎င်းအပြင်
မိမိ၏ Gmail Password သည် အခြားနေရာများတွင် အသုံးပြုခြင်း မရှိသော Password ဖြစ်ရန်လိုပြီး ရံဖန်ရံခါ ပြောင်းလဲပေးရန် လိုပါသည်။ ထိုသို့သောပြုလုပ်ခြင်းများအတွက် Reset နှင့် Recovery Options များကိုလည်း မှန်ကန်အောင် လုပ်ဆောင်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
၎င်းနောက် Sign-in & Security ထဲသို့ ထပ်မံသွားရောက်ရမည်။ ထိုအခါတွင် Password & Sign-in Method ကို မြင်တွေ့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၎င်းတွင် Password ပြောင်းလဲခဲ့သည့်နောက်ဆုံးရက်စွဲကို ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်ပြီး ပြောင်းလဲလိုပါက ၎င်းကို ကလစ်နှိပ်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင် ပါသည်။ ၎င်းအောက်တွင် 2-Step Verification ကဏ္ဍပါရှိပြီး Account ကို ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချစွာ အသုံးပြုလိုသူများအတွက် စီစဉ်ထားနိုင်သည့် နေရာဖြစ်ပါသည်။ Account Recovery Options တွင် မိမိအတွက် အရန် E-mail ထားရှိထားရန်လိုအပ်ပြီး Phone No. ကို ထည့်သွင်းထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
အသုံးပြုသူအနေဖြင့် မိမိ၏ E-mail ကို ပိုမို၍လုံခြုံစိတ်ချစေလိုလျှင်2Step Verification ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသေးသည်။ အောက်ပါပုံကို ကြည့်ပါ။
၎င်းတွင် မိမိ E-mail သို့ အသုံးပြုရန်ဝင်ရောက်သည့်အခါ တိုင်းတွင် Password အပြင် Verification code ပါလိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို မိမိ၏ဖုန်းသို့ Google မှ Text Message ဖြင့် ပေးပို့ပေးမည် ဖြစ်ပြီး ရရှိလာသော Code ကို အသုံးပြု၍၀င်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းကို2Step Verification ဟုခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၎င်းကို စတင်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် Get Started ကိုနှိပ်ပါ။ ထိုအခါ မိမိ Account Password ကို ပြန်လည်တောင်းခံလာပါက ထည့်ပေးပါ။ ၎င်းနောက် Phone Setup လုပ်ငန်းစဉ်စတင်ပါလိမ့်မည်။ အောက်ပါပုံကို ကြည့်ပါ။
၎င်းတွင် မိမိအသုံးပြုနေသည့် ဖုန်းနံပါတ်ကို ရေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိ Code ရယူလိုသည့်နည်းလမ်းကို ရွေးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Text Message ကိုရွေးပြီး Next ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ထိုအခါတွင် Google မှ Phone Verification အလုပ်လုပ်ခြင်းရှိ၊ မရှိကိုစမ်းသပ်သည့် အနေဖြင့် မိမိ၏သတ်မှတ်ထားသော Phone သို့ Code ကို Message ဖြင့် ပေးပို့လိုက်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကိုသတ်မှတ်ထားသောနေရာတွင် ရိုက်ထည့် ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Code ကို ရိုက်ထည့်ပေးပြီးပါက Next ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ထိုအခါ Verification လုပ်ငန်းစဉ်အောင်မြင်ပြီဖြစ်သဖြင့် Turn On ကိုနှိပ်ပြီးဖွင့်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
မိမိလုပ်ဆောင်ချက်များ၊ Gmail သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့မှုများ စသည့် Activity များကိုလည်း Check လုပ်ရန် လိုအပ်ပါက Account Setting Page ရှိ My Activity တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသေးသည်။
၎င်းကဏ္ဍတွင် ရက်စွဲအလိုက် မိမိ Account ဖြင့် Sign in ၀င်ရောက်ခဲ့မှုအခြေအနေများအပြင် အခန်းကဏ္ဍများ ခွဲခြားထားပြီး မိမိအသုံးပြုခဲ့ခြင်းများ၊ ရှာဖွေခဲ့ခြင်းများ၊ Play Store ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ You Tube ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို မြင်တွေ့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ Google မှပံ့ပိုးပေးထားသည့် Products များအားလုံးကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အတွက် မိမိအမှန်တကယ်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းရှိ၊ မရှိသိရှိနိုင်မည့်အပြင် လိုအပ်ပါက ထပ်မံ၍ လုံခြုံစိတ်ချရသော အစီအမံများကို ချမှတ်ထားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Gmail သညျ E-mail အသုံးပွုသူမြားအကွားတှငျ ရပေနျးစားအသုံးမြားခဲ့သညျမှာ ကွာခဲ့ပွီဖွဈပါသညျ။ လုပျငနျးနယျပယျ အသီးသီး တှငျသာမက Personal mail မြားအဖွဈ Gmail ကို တှငျတှငျကယျြကယျြ အသုံးပွုနကွေခွငျးဖွဈပွီး ၎င်းငျး၏လုံခွုံမှုအတှကျလညျး အစီအမံမြားစှာ ရှိနပွေီးဖွဈသညျ။ ထိုသို့အစီအမံမြားစှာထဲမှ အသုံးပွုသူမြားအတှကျ အဆငျပွသေငျ့တျောမညျ့ လုံခွုံရေးနညျးလမျးမြားကို ဖျောပွပေး လိုကျရပါသညျ။
အသုံးပွုသူတိုငျး မဖွဈမနေ ပွုလုပျထားသငျ့သညျမှာ မိမိ Account ၏ Password လုံခွုံမှုနှငျ့ ကွံ့ခိုငျစမှေုပငျဖွဈပါသညျ။ ယခငျအပတျ မြားတှငျ Password Security နှငျ့ ပတျသကျသညျ့ အခကျြအလကျမြားကို ရေးသားခဲ့ပွီးဖွဈသလိုယခု Gmail အသုံးပွုသူမြားအတှကျ Password Security ပိုငျးမြားတှငျလညျး ထိုနညျးတူပငျ အသုံးပွုနိုငျပါသညျ။ ၎င်းငျးအပွငျ သိရှိထားသငျ့သညျမှာ Gmail password သညျ Google Account Password ပငျဖွဈပွီး Google မှပေးထားသညျ့ မြားပွားလှသော ဝနျဆောငျမှုမြားကို အသုံးပွုနိုငျသညျ့အတှကျ လှနျစှာအရေးကွီးပါသညျ။
Password တဈခု Strong ဖွဈစရေနျ အနညျးဆုံး Capital Letter, Number, Special Characters မြား ပါဝငျသငျ့ပါသညျ။ ၎င်းငျးအပွငျ
မိမိ၏ Gmail Password သညျ အခွားနရောမြားတှငျ အသုံးပွုခွငျး မရှိသော Password ဖွဈရနျလိုပွီး ရံဖနျရံခါ ပွောငျးလဲပေးရနျ လိုပါသညျ။ ထိုသို့သောပွုလုပျခွငျးမြားအတှကျ Reset နှငျ့ Recovery Options မြားကိုလညျး မှနျကနျအောငျ လုပျဆောငျထားရနျ လိုအပျပါသညျ။
ဦးစှာ Password ကိုပွောငျးလဲနိုငျရနျအတှကျ Account Setting ထဲသို့သှားရမညျဖွဈပါသညျ။ အောကျပါပုံကိုကွညျ့ပါ။
၎င်းငျးနောကျ Sign-in & Security ထဲသို့ ထပျမံသှားရောကျရမညျ။ ထိုအခါတှငျ Password & Sign-in Method ကို မွငျတှရေ့မညျ ဖွဈပါသညျ။
၎င်းငျးတှငျ Password ပွောငျးလဲခဲ့သညျ့နောကျဆုံးရကျစှဲကို ဖျောပွပေးမညျဖွဈပွီး ပွောငျးလဲလိုပါက ၎င်းငျးကို ကလဈနှိပျပွီး ပွောငျးလဲနိုငျ ပါသညျ။ ၎င်းငျးအောကျတှငျ 2-Step Verification ကဏ်ဍပါရှိပွီး Account ကို ပိုမိုလုံခွုံစိတျခစြှာ အသုံးပွုလိုသူမြားအတှကျ စီစဉျထားနိုငျသညျ့ နရောဖွဈပါသညျ။ Account Recovery Options တှငျ မိမိအတှကျ အရနျ E-mail ထားရှိထားရနျလိုအပျပွီး Phone No. ကို ထညျ့သှငျးထားရနျ လိုအပျပါသညျ။
အသုံးပွုသူအနဖွေငျ့ မိမိ၏ E-mail ကို ပိုမို၍လုံခွုံစိတျခစြလေိုလြှငျ2Step Verification ကို အသုံးပွုနိုငျပါသေးသညျ။ အောကျပါပုံကို ကွညျ့ပါ။
၎င်းငျးတှငျ မိမိ E-mail သို့ အသုံးပွုရနျဝငျရောကျသညျ့အခါ တိုငျးတှငျ Password အပွငျ Verification code ပါလိုအပျမညျဖွဈပွီး ၎င်းငျးကို မိမိ၏ဖုနျးသို့ Google မှ Text Message ဖွငျ့ ပေးပို့ပေးမညျ ဖွဈပွီး ရရှိလာသော Code ကို အသုံးပွု၍ဝငျရောကျရမညျဖွဈပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ၎င်းငျးကို2Step Verification ဟုချေါဆိုခွငျး ဖွဈပါသညျ။
၎င်းငျးကို စတငျလုပျဆောငျရနျအတှကျ Get Started ကိုနှိပျပါ။ ထိုအခါ မိမိ Account Password ကို ပွနျလညျတောငျးခံလာပါက ထညျ့ပေးပါ။ ၎င်းငျးနောကျ Phone Setup လုပျငနျးစဉျစတငျပါလိမျ့မညျ။ အောကျပါပုံကို ကွညျ့ပါ။
၎င်းငျးတှငျ မိမိအသုံးပွုနသေညျ့ ဖုနျးနံပါတျကို ရေးသှငျးရမညျဖွဈပွီး မိမိ Code ရယူလိုသညျ့နညျးလမျးကို ရှေးပေးရမညျဖွဈပါသညျ။ Text Message ကိုရှေးပွီး Next ကိုနှိပျလိုကျပါ။ ထိုအခါတှငျ Google မှ Phone Verification အလုပျလုပျခွငျးရှိ၊ မရှိကိုစမျးသပျသညျ့ အနဖွေငျ့ မိမိ၏သတျမှတျထားသော Phone သို့ Code ကို Message ဖွငျ့ ပေးပို့လိုကျမညျဖွဈပွီး ၎င်းငျးကိုသတျမှတျထားသောနရောတှငျ ရိုကျထညျ့ ပေးရမညျဖွဈပါသညျ။
ထိုအခါ Verification လုပျငနျးစဉျအောငျမွငျပွီဖွဈသဖွငျ့ Turn On ကိုနှိပျပွီးဖှငျ့ထားနိုငျပွီဖွဈပါသညျ။
မိမိလုပျဆောငျခကျြမြား၊ Gmail သို့ ဝငျရောကျခဲ့မှုမြား စသညျ့ Activity မြားကိုလညျး Check လုပျရနျ လိုအပျပါက Account Setting Page ရှိ My Activity တှငျ ၀ငျရောကျကွညျ့ရှုနိုငျပါသေးသညျ။
၎င်းငျးကဏ်ဍတှငျ ရကျစှဲအလိုကျ မိမိ Account ဖွငျ့ Sign in ၀ငျရောကျခဲ့မှုအခွအေနမြေားအပွငျ အခနျးကဏ်ဍမြား ခှဲခွားထားပွီး မိမိအသုံးပွုခဲ့ခွငျးမြား၊ ရှာဖှခေဲ့ခွငျးမြား၊ Play Store ဆိုငျရာ အခကျြအလကျမြား၊ You Tube ဆိုငျရာအခကျြအလကျမြားကို မွငျတှရေ့မညျ ဖွဈပါသညျ။ Google မှပံ့ပိုးပေးထားသညျ့ Products မြားအားလုံးကို မွငျတှရေ့မညျဖွဈပါသညျ။
ထို့အတှကျ မိမိအမှနျတကယျပွုလုပျခဲ့ခွငျးရှိ၊ မရှိသိရှိနိုငျမညျ့အပွငျ လိုအပျပါက ထပျမံ၍ လုံခွုံစိတျခရြသော အစီအမံမြားကို ခမြှတျထားနိုငျမညျ ဖွဈပါသညျ။
Previous PostDead Cells
Next PostOPPO F9 မိတ်ဆက်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့